Malunga nathi - Ningbo Jinlai Chemical Co., Ltd.
Sifuna ukukhula ngokufanayo nawo onke amaqabane exesha elide kwaye sizama ukwenza igalelo elifanelekileyo eluntwini nasemhlabeni.
Ukuziqhelanisa nabantu, ukhuseleko kunye nokhuselo lokusingqongileyo, uphawu lwenzululwazi kunye netekhnoloji
I-Ningbo Jinlai Chemical Co, Ltd. yinkampani yemichiza ephezulu. Ukubambelela kwifilosofi yophuhliso "lokuba ngabantu, okhuselekileyo kunye nokusingqongileyo, kunye nophawu lwetekhnoloji", siyasebenzisana namaziko ophando lweekhemikhali amaninzi asekhaya nakwamanye amazwe ukwazisa ngeendlela zokuqhubela phambili nezikhulileyo zokuvelisa uthotho lweemveliso ezisemgangathweni , kubandakanya i-50,000 t / a ye-3-Chloro-2-methylpropene (MAC); I-28,000 t / a ye-2-Methyl-2-propen-1-ol (MAOH); I-8,000 t / a yeSodium methallyl sulfonate (SMAS); I-5,000 t / a yeoyile ye-acrylic fiber kunye ne-2,000 t / a yeoyile ye-polyimide yefayibha, njl. Ngenxa yokuqhubeka kwetekhnoloji, sinobuchule bokukhulisa ukhuphiswano lweemveliso kwintengiso.
Okwangoku, iimveliso zethu zithengiswa kakuhle kumazwe angaphezu kwama-50 njenge-United States, iJapan, iJamani neFrance, njl. Ngelo xesha, siphumelele ukuba ngumthengisi we-PetroChina kunye neSinopec, kunye neqabane lehlabathi eliphezulu Iinkampani ezingama-500.
Ngezicelo zeminyaka, iimveliso zethu ziye zamkelwa kakhulu ngabathengi bethu ngomgangatho ophezulu kunye nodumo. Ngoku, iimveliso zethu zisetyenziswa ngokubanzi kwimichiza ye-petroleum, amayeza, amayeza okubulala izitshabalalisi, iziqholo, ii-acrylic fiber ezincedisayo, isizukulwane samvanje esinciphisa amanzi njengearhente yekhonkrithi nokwenza iphepha, njl. kubandakanya i-Porous honeycomb-like) iioyile kunye nesizukulwana esitsha seeoyile ezikhethekileyo zokudaya umqhaphu kunye nokusonta kusombulule iingxaki ezininzi ngokuluka, kubandakanya Isantya esiphakamileyo sokujikeleza kwePorester kunye ne-honeycomb-efana ne-polyester ifayibha eguqulweyo, ukuchukumisa ikotoni edayiweyo, kunye nesantya sokujikeleza njl.
Siyakholelwa kuloo nto siza kuba yinkokheli yolu rhwebo kwihlabathi ngokomgangatho kunye namaxabiso! "Iimveliso ezisemgangathweni, amaxabiso amahle kunye neenkonzo ezinyanisekileyo" kukuzibophelela kwethu. Sifuna uphuhliso olufanayo nawo onke amaqabane exesha elide kwaye sizama ukwenza igalelo elifanelekileyo ebantwini nasemhlabeni.
Ifilosofi yeshishini lenkampani
Ifilosofi yeshishini lweshishini ngumphefumlo wenkcubeko yecandelo, isikhokelo sophuhliso lweshishini, umgaqo wobomi benkampani, kunye namandla eshishini lokuqokelela abantu. Xa inkampani ifikelela kwinqanaba elithile, kufuneka isombulule iingxaki ezintathu. Isizathu esinye kukuba kubalulekile ukuqhuba ishishini. Loluphi uhlobo lweshishini oza kuluqhuba, lo ngumbuzo wenjongo kunye nenjongo yeshishini. Okwesibini yindlela yokuqhuba ishishini. Lo ngumbuzo wendlela. Okwesithathu kukuxhomekeka ekubeni ngubani oqhuba ishishini. Esi sisitshixo kwimpumelelo yeshishini. Ezi ngxaki zintathu ziingxaki ekufuneka zisonjululwe yifilosofi yeshishini lenkampani. Xa sasungula ifilosofi yeshishini lenkampani, ngokusekwe kukuqonda kwethu le micimbi mithathu, saqulunqa injongo "yokudala ubutyebi kunye nophuhliso oluhambelanayo" kunye neenqobo "zovuselelo, imvisiswano kunye nophuhliso." Injongo yethu kukukwakha inkampani ibeyiklasi yokuqala yasekhaya, kwilizwe liphela-eliqeqeshiweyo elenza ngemizi-mveliso yabancedisi bemichiza, ioyile kunye nokunyibilikisa.
Iimveliso eziMgangatho oPhezulu, amaXabiso aKhethekileyo, iNkonzo yokunyaniseka